Sida Loo Rip Music Meelaha CD-yada Isticmaalida Windows Media Player 11
Sida loo Rip Audio CDs ee Windows Media Player 11
Muuqaalka © 2008 Mark Harris - Ruqsad u Leedahay About.com, Inc.
Haddii aad qaadatay ururinta CD-yada maqalka ah ee aad hadda rabto inaad u wareejiso cayaaraha muusikada la qaadi karo, ka dibna waxaad u baahan doontaa inaad soo qaadato (ama ku dhajiso) codka iyaga oo u duubaya qaab digital ah. Windows Media Player 11 ayaa ka saari kara macluumaadka dhijitaalka ah ee ku saabsan CD-gaaga jir-dhiskaaga oo ku xiri doona qaabab dhowr ah oo codka ah; markaa waxaad u gudbin kartaa feylalka MP3-gaaga, u gubi MP3 CD , USB-gaaga iwm. CD Ripping wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhageysatid ururinta muusiga oo dhan markaad asal ahaan ka dhigayso meel nabad ah; mararka qaarkood CD-yada waxay ku jiri karaan waxyeelo shilalka ah oo keeni kara iyaga aan la qaban karin. Marka laga eego aragtida fudud, adigoo haysta ururinta muusikada ku kaydsan sida faylasha maqalka ah waxay kuu sahlaysaa inaad ku raaxaysato muusikadaada oo dhan iyada oo aan la maareynin wadashaqaynta adigoo kaashanaya CD-yada raadinaya hal gaar ah, farshaxan, ama hees.
Ogeysiiska Sharciga: Ka hor intaadan sii wadin tababarkan, waa lagama maarmaan inaadan ku xadgudubin waxyaalaha ku saabsan maqaalka. Kala qaybinta shaqooyinka copyrighted ee Maraykanka by kasta oo macnaheedu waa ka soo horjeeda sharciga iyo waxaad la kulmi kartaa dacwo RIAA; wadamada kale fadlan hubi sharciyadaada khuseeya. Warka fiicani wuxuu noqon karaa inaad caadi ahaan nuqul ka samaysan karto naftaada illaa intaad iibsatay CD sharci ah oo aadan kala qaybin; akhri Cajiibka iyo Diidmada ee CD-ga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Nidaamka ugu dambeeyay ee Windows Media Player 11 (WMP) waxaa laga soo dejisan karaa website-ka Microsoft. Markaad diyaar u tahay inaad bilowdo, maamusho WMP kadibna riix icon ikhtiyaar yar oo ku yaalla Rip tabka (oo muujinaya buluug ee kor ku xusan) ee korka shaashadda. Furaha menu ayaa soo bixi doona oo muujinaya dhowr waxyaabood oo menu ah - guji khiyaaro dheeraad ah si aad uhesho goobaha ku habboon ee Media Player.
Dejinta si aad ugu dhajiso CD
Xilliga doorashada ee Windows Media Player ayaa kuu oggolaanaya inaad xakameyso:
Meelaha muusiga lagu kaydiyo
Nooca qaabka codka
Tallaabooyinka ay tahay in la qaato marka la gelinayo CD iyo marka uu dhammaado xilliga foosha
Dejinta tayada dhawaaqa
Rip Music to Location this Place: adoo gujinaya Isbadelka waxaad sheegi kartaa halkaa oo lagaa keydiyay.
Format: Waxaad dooran kartaa MP3 , WMA , WMA Pro, WMA VBR , WMA Lossless, iyo qaababka codka WAV adigoo riixaya astaanta yar- hoose ee hoosta kuxiran ee qaabka qaabka. Haddii aad ku wareejiso codka ripka ah ee MP3-ka ka dibna fiiri si aad u aragto qaababka ay taageerto; dooro MP3 haddii aan la hubin.
Rip CD Marka Lagu Galo: Tani waa faaiido wax ku ool ah oo lagu isticmaalo haddii aad leedahay CD-yo badan oo aad ku riixdo isugeyn. Waxaad u sheegi kartaa Windows Media Player inay si toos ah u bilaabaan si buuxda CD marka la geliyo DVD / CD-ga. Goobta ugu fiican ee lagu dooran karo waa marka kaliya ee Rip Tab .
Eject CD Marka Ripping Dhammaystiran: Dooro ikhtiyaarkan iyada oo la socota meesha kor ku xusan haddii aad bedelayso qayb ka mid ah CD-yada; waxay ku badbaadin doontaa waqti aad ku celcelisid badhanka badhanka ka dib marka CD walba la shaqeeyo.
Tayada Sare : Tayada maqalka ee faylasha wax soo saarka ah waxaa lagu hagaajin karaa barta hoose ee wareegsan. Mar walba waxaa jira ganacsi u dhexeeya tayada codka maqalka iyo faylka marka la macaamilayo qaababka cod-bixinta ee la jabiyay. Waa inaad tijaabisid goobtan si aad u hesho dheelitirka saxda ah maaddaama ay si wayn u kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba inta soo noqnoqota ee ilahaaga maqalka ah. Haddii aad ku codsanayso qaabka WMA-ga ah ka dibna dooro WMA VBR taas oo ku siin doonta tayada codka ugu fiican si aad u yeelatid saamiga faylka. Habka faylka MP3 waa in lagu qortaa wax yar oo ah 128 kbps si loo hubiyo in farshaxanada loo hayo ugu yaraan.
Marka aad ku faraxsan tahay dhammaan goobaha aad riixi karto Codso raacida badhanka OK si aad u badbaadiso oo uga baxdo menu-ka ikhtiyaarka ah.
Xulashada CD-yada si aad u riixdo
Haddii aad ku rakibtay Windows Media Player si aad si toos ah u bilowdo CD-ga codka ah sida ugu dhakhsaha badan ee CD-ga la geliyo markaa dhamaan wadooyinka ayaa la dooran doonaa; si aad u dooratid oo keliya jidadka qaarkood si aad u riixdo waxaad riixi kartaa Roobka Jooji , dooro jaangooyooyinka aad rabto, ka dibna riix batoonka Rip Start .
Taas bedelkeeda, haddii rikoodhada si toos ah loo damiyo markaa waxaad u baahan doontaa inaad doorato albaabka oo dhan (guji sanduuqa kore) ama shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah adigoo gujinaya sanduuqa saxda ah. Si aad u bilowdid inaad ku riixdo CD-gaaga, riix batoonka Rip Start .
Inta lagu guda jiro nidaamka qallajinta, waxaad arki doontaa barxad horumarineed oo cagaaran oo soo socota dhinac kasta oo la raacayo iyada oo la shaqeynayo. Marka wadada safka ee safka la farsameeyo, ayaa lagu soo duubay fariin maktabadda lagu soo bandhigi doono tiirarka "Rip Status".
Hubinta faylasha codkaaga dillaacay
Hadda waa waqtigii lagu xaqiijin lahaa in faylasha la abuuray ay ku jiraan maktabaddaada Windows Media Player iyo inay eegaan sida ay u dhawaaqayaan.
Ugu horeyn, guji miiska laybareeriga (waxay muujinaysaa midab buluug ah oo kor ku xusan) si loo helo fursadaha maktabada ee Media Player. Marka xigta, fiiri liiska menu ee bidixda bidix waxaadna gujisaa Diiwaangelinta Dhawaan ah si loo xaqiijiyo in dhammaan wadooyinka aad rabto in si guul leh loo leexiyay maktabadda.
Ugu dambeyntii, si aad u ciyaarto albaabka oo dhan la ruxay bilawga, laba jeer guji farshaxanka, ama hal jihe, kaliya laba jeer waxaad ku dhajisaa lambarka track-aad ee aad rabto. Haddii aad ogaato in aad dillaacday faylasha maqalka ha weyneyn markaas waxaad mar walba bilaabi kartaa oo dib u-riixi kartaa adigoo isticmaalaya meel tayo sare leh.
Markaad dhisto maktabadda waxaad u baahan kartaa inaad akhriso tabobarka ku saabsan sida loo dhiso maktabad muusik oo si faahfaahin ah uga soo dejiya faylasha muusikada digital-ka ah meelo kale (hannaan adag oo adag, USB-ga, iwm)
Barnaamijyada bilaashka ah ee beddeli kara Windows Media Player
Tilmaamaha Tallaabo-tallaabo ee lagu gubayo MP3 CD-ga Windows Media Player 12
Barnaamijka CD-ga CD-ga iyo Ka-saarista
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Editing on Mac
Dib-u-eegista Adeegga Muusikada ee PureVolume
Weydiiso: Sidee ayaan ugu diraa Video ama Movie on iTunes?
Xatooyada Xanuunka Awoodda IV: Ballad of Code of Tony Cheat Cheat - PC
Disable SSID daaro si aad u qariso shabakada Wi-Fi
Sidee ayaad ku xiri kartaa Subwoofer si Nidaamka Stereo ah
Sida Loo Helo Qoraalka
Qoob-ka-ciyaarida ciyaaraha Online
Sida Loo Bixiyo Macalimiinta kaaga iPhone
Sida loo ciyaaro muusikada Teamspeak 3 ee kombiyuutarka
Mashruucyada CHAR iyo CODE Excel ee Excel
Waa maxay telefishanka Apple?
IPad Mini oo leh Retina Display iyo Kindle Fire HDX 8.9-inch
Ku darista saaxiibo loo diro Windows Live Messenger
Samee - Command Linux - Unix Command
Mashruuca Tony Hawk ee Project 8 Cheats - Xbox 360
Software Packet Free Software Sniffer
Epson PowerLite Home Cinema 3500 Mashruuca - Natiijooyinka Imtixaanka Iskudhinta ee Video
Sidee loo abuuraa Sawirka Sepia Sawirada ee Photoshop
CES 2014: Wadahadalada cusub ee Bluetooth I - M
ION Audio VCR 2 PC VHS Player - Dib u eegis
Isticmaalida Habka Overtype iyo Insert ee Microsoft Word
Sida loo kordhiyo iyo meesha looga saaro cinwaannada emailka loogu talagalay dadka soo dira VIP ee macOS Mail